SANN MAW: 2011
Posted by Admin at Thursday, June 23, 20113comments
Posted by Admin at Wednesday, June 01, 20117comments
Posted by Admin at Tuesday, May 31, 20113comments
Chernobyl Nuclear Accident Part 4
ချာနိုဘိုင်း ညူကလီးယားပြဿနာ အပိုင်း (၄)
ဒီ ချာနိုဘ်ိုင်း ညူကလီးယားစက်ရုံမှာ RBMK-1000 Type ဓါတ်ပေါင်းဖို အမျိုးအစား unit-1, unit-2, unit-3, unit-4 ဆိုပီး ၄ လုံး ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက မှ unit-1 နဲ့ unit-2 ကို ၁၉၇၀ နဲ့ ၁၉၇၇ မှာ တည်ဆောက် ခဲ့ပီး။ ယူနစ် ၃ နဲ့ ၄ ကိုတော့ ၁၉၈၃ မှာ တည်ဆောက်ပြီးခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင် ယူနစ် ၅ နဲ့ ၆ ဟာလည်း ပေါက်ကွဲမှု့ဖြစ် တုန်းက တည်ဆောက်နေဆဲ အခြေအနေမှာဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ ယူနစ် ၄ မှာ အေပရယ် ၂၆ ရက် ၁၉၈၆ မှာ ပေါက်ကွဲမှု့ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ပေါက်ကွဲမှု့ဖြစ်စေတဲ့ အဓိက ကျတဲ့ အချက် အလက်တွေက တော့ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်တယ်။
Posted by Admin at Monday, May 30, 20113comments
Labels: Chernobyl, Nuclear, Nuclear Accident, Nuclear Reactor
Chernobyl Nuclear Accident Part 3
ချာနိုဘိုင်း ညူကလီးယားပြဿနာ အပိုင်း (၃)
မနေ့က ဓါတ်ပေါင်းဖိုကနေ လျှပ်စစ်ဘယ်လိုထုတ်သလဲဆိုတာထိပြောပီးသွားပီ။ တခုပြောဖို့ကျန်သွားတာက ပေါင်းဖိုရဲ့ graphite blocks တွေကြားမှာ နိုက်ထရိုဂျင် နဲ့ ဟီလီယမ် ဓါတ်ငွေ့ အရောကို ထည့်ပီး လှည့်ခိုင်းထားတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လှည့်ခိုင်းထားတာလဲ ဆိုရင်တော့ graphite တွေကို အောက်စီဂျင်နဲ့ဓါတ် ပြုပီး oxidation ဖြစ်ပေါ်မှု့ကနေ ကာကွယ်ဖို့နဲ့ လောင်စာချောင်းတွေက ထွက်လာတဲ့ အပူစီးကူး မှု့ကို ပိုမို ကောင်းမွန် အောင် ပြု့လုပ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။
Posted by Admin at Sunday, May 29, 20113comments
Chernobyl Nuclear Accident Part 2
ချာနိုဘိုင်း ညူကလီးယားပြဿနာ အပိုင်း (၂)
၁၉၈၆ မှာ (USSR) လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုဗီယက်မှာ ညူဓါတ်ပေါင်းဖို ၄၃ လုံးကနေကမ္ဘာစွမ်းအင် ရဲ့ ၁၀ ရာခိုင်နုန်း လောက်ကို ထုတ်ပေးနေတယ်လို့သိရတယ်။ မီဂါဝပ်အားဖြင့်ကတော့ ၂သောင်း၇ထောင်လောက်ရှိမယ်။ အဲ့တုန်းက နောက်ထပ် ပေါင်းဖို ၃၆လုံးကို တည်ဆောက်နေဆဲ ဖြစ်ပီး မီဂါဝပ် ၃သောင်း ၇ ထောင် လောက်ထုတ်ဖို့မှန်းထားခဲ့တယ်လို့သိရတယ်။ ၁၉၈၆ တုန်း ညူကလီးယားပေါက်ကွဲမှု့မ တိုင်ခင်မှာ ချာနိုဘိုင်းမှာ နောက်ဆုံးပေါ် ဓါတ်ပေါင်းဖိုအမျိုးအစား RBMK-type ၄ လုံးလည်ပါတ် နေတယ်လို့သိရပီး၊
Posted by Admin at Saturday, May 28, 20112comments
Chernobyl Nuclear Accident Part 1
ချာနိုဘိုင်း ညူကလီးယားပြဿနာ အပိုင်း (၁)
ကဲဒီနေ့တော့ မကောင်းမွန်ဝင်း မနေ့က ကွန်းမန့် လာရေးသွားတော့ တွန်းအားလေး ရှိတုန်း စာနည်းနည်း ရေးတင် လိုက်ပါဦး မယ်ဗျာ။ မကောင်းမွန် ဝင်း နဲ့ တခြားသောစာဖတ်သူများဗျာ ခုလိုလာရောက်အားပေးတာ ကျေးဇူးပါနော့်။ ခုတလောက ဘွဲ့အတွက် သီးစစ်စာအုပ် ရေးနေတာဆိုတော့ ဘလောဂ့် ဘက်မလှည့်နိုင်တာ အတော်ကြာသွားတယ်။ ဆောရီးဗျာ ခုစာအုပ်ရေးတာတော့ အကြမ်းလက်စ သပ်ထားပီ ဆိုတော့ တပါတ် ၂ ပုဒ် ၃ ပုဒ်လောက်တော့ ရေးနိုင်မယ်လို့ တော့ ယူဆရပါတယ်။ အဲ့ Presentation လုပ်ရမယ့်ရက်နီးလာရင်တော့ တခါ ခနလောက်တော့ ရပ်သွားဦးမယ်ထင်တယ်နော်။ ဒါကတော့ စကား မစပ် ကြိုပီး အသိပေးထားတဲ့သဘောပါ။ ဒီနေ့ ကတော့ အရင်တုန်းက ပြောထားတဲ့ အကြွေးကျန်နေသေးတဲ့ ချာနိုဘိုင်းအကြောင်း အခန်းဆက်ဆောင်းပါး ပထမပိုင်းကို တင်မယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။ အခန်းဆက်ဖြစ်သွား တဲ့သဘောကတော့ ခုတလော သီးစစ် အတွက် ပြင်ဆင်ရတာရယ် ကြောင့်အချိန်သိပ်မရတာရယ်နောက် ချာနိုဘိုင်းအကြောင်းက နည်းနည်းရှည်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အခန်းဆက်ဖြစ်သွားကြောင်းပါဗျာ။
Posted by Admin at Saturday, May 28, 20114comments
Posted by Admin at Saturday, April 09, 20116comments
Posted by Admin at Wednesday, April 06, 20114comments
ရေနံဆီ အပူပေးစက်များသုံးက သတိထားရန်
ဒီနေ့ ဂျပန်သတင်းမှာ ဖတ်လိုက်ရတာက အီဝတဲခရိုင်က အဖိုးအို တစ်ယောက် ဓါတ်ဆီတန်းစီ ရင်း သူ့ကားထဲမှာ သေနေတာတွေ့တယ်ပြောတယ်။ ဖြစ်တာက.ခုချိန်က ဓါတ်ဆီရှားတော့ ကားတွင်းပါတဲ့ အနွေးပေးစက်ကို မသုံးပဲ.. အိမ်တွေမှာ သုံးတဲ့ ရေနံဆီနဲ့ သုံးရတဲ့.. အပူပေးစက်ကို ကားထဲမှာ ထည့်သုံးတာတဲ့.. ဆိုတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ ကားမှန်တွေကလဲ..လေစိမ်းမဝင်အောင် အကုန်ပိတ်ထားတယ်။ ရေနံဆီအပူပေးစက်ကလဲ.. အောက်စီဂျင်ကိုလောင်ပီး ကာဘွန်မိုနောက်ဆိုဒ် တွေ ထုတ်ပေးဆိုတော့..အောက်ဆီ၈ျင်ပြတ်ပီး သေတဲ့သဘောပဲ။
၁) သေဆုံး သူ ၉၄၀၀ ကျော် ဖြစ်
၂) တိုကျို tap water မှာ တွေ့ရသော ရေဒီရေးရှင်း လယ်ဗယ်သည် သတ်မှတ် စိတ်ချရသော လယ်ဗယ်ထက်မြင့်သဖြင့် ကလေးငယ်များ သောက်သုံးရန် မသင့်တော်ကြောင်းတွေ့ရ
(သောက်မိပါကလည်း ချက်ချင်း အန္တရာယ်တော့ မဖြစ်နိုင်)
Posted by Admin at Wednesday, March 23, 20113comments
၁) သေဆုံးသူး ပေါင်း ၉၃၀၀ ကျော်သွားပီပြောတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ ခေါင်းတလား တောင် မရှိတော့ ဘူး ဖြစ်နေတယ်ပြောပါတယ်။
Posted by Admin at Wednesday, March 23, 20110comments
Collection of useful links in this latex page. This page will be update when I find useful pages.
Example Syntax formula in Latex
Posted by Admin at Monday, March 21, 20110comments
Labels: Academic, latex, Research
ဂျပန် ညူအတွက် မေးခွန်း ၁၀ ခု နှင့်အဖြေ များ
မနေ့က သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ရှေရှေဝေးဝေးတွေ ရှောက်ပြောနေ တာနဲ့စာရင် လူအများစု သိချင်တာ ကို တိုတိုတုတ်တုတ် ရေးပီးတင်ပေးပါလို့ ဆိုလာပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ လူများစုက ဘာတွေ သိချင်နေကြတာလဲ မင်းသိရင် ပြောပါဦးဆိုလို့၊ သူက မေးခွန်း ၁၀ ခု ပို့လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ မေးခွန်း ၁၀ ခု ကို ပဲ ပြန်ဖြေပေးပီးတင် ပေးလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးဖတ်ရတာ ရှင်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်။
20 March update news for Japan Nuclear Plant
ခုနပဲ သတင်းကြေညာသွားတယ် ပေါင်းဖို (၂) မှာ ရေအေးပေးစက်ပြန်လည်နေပီတဲ့။ ဆိုတော့ သိပ်မကြာခင် အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ နောက်ပေါင်းဖို (၃) က ပရက်ရှာမြင့်နေတာကိုလည်း လောလောဆယ် ရေငွေ့ဖေါက်ထုတ်စရာ မလိုသေးပဲ စောင့်ကြည့်နေတုန်းလို့ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့ ၈ ထောင်ကျော်ဖြစ်သွားပီ။ ၁၂၀၀၀ ကျော်ပျောက်ဆုံးပါသေးတယ်။ စု့စု့ပေါင်း သေဆုံးသူ ၂သောင်းကျော်နိုင်မယ်လို့တော့ ခန့်မှန်းတယ်ကြားတယ်။
အပျက်အစီးကတော့လောလော ဆယ်ခန့်မှန်းထားသလောက် US$ ဘီလီယမ် ၁၈၀ ခန့် လို့သိရပါတယ်။
Posted by Admin at Sunday, March 20, 20110comments
Adding Blog Lists
ဒီနေ့တော့ ကိုယ်ဖတ်လေ့ ဖတ်ထရှိတတ်တဲ့ ဘလောဂ်တွေကို ကိုယ့် List မှာ ပေါင်းထည့်ထား လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ နောက်ပိုင်းကြတော့ ရှာရလွယ်သွားတာပေ့ါ။ မဟုတ်ရင် ကွန်ပျုတာပြောင်းသွားရင် တခါပြန်ပြန်မှတ်နေရတယ်။ Google Bookmark ဆိုတာကလဲ ရှိတယ်ပြောတယ်၊တခါလောက်စမ်းသုံးကြည့်ပီးနောက်ထပ်မသုံးဖြစ်တော့ဘူး၊သိပ်အဆင်မပြေသလိုပဲ
ခုတော့ ကိုယ်ဆိုက်ဒ် ကနေ အလွယ်တကူ သွားလို့ရသွားပီ။
radioactive material iodine in tap water of tokyo
ခု န လေးတင် ထပ်သိတဲ့ သတင်းကတော့ ခု တိုကျိုမှာ ပိုက်ရေကနေ ရေဒီရေးရှင်းစတွေ့ တယ်ပြောသွားတယ်။ နည်းတော့နည်းပါတယ်။ ၁.၅ ယူနစ်ပေ့ါ . သူက ၃၀၀ယူနစ် ကျော်မှာ အန္တရာယ်ရှိတယ်ပြောတယ်၊ ၁ ကီလိုကိုပြောတာ။ ဒါပေမယ့် အရင် လုံးဝနီးပါး မတွေ့တာကနေ စတွေ့လာတဲ့
သဘောပေ့ါ။ နည်းနည်းတော့ သတိထားရမယ့်သဘောရှိတယ်။ အသေးစိတ်ကတော့ အယ်ဂျာဇီးယား ဆိုက်မှာ သာ သွားကြည့်လိုက်ကြပါ။
၁) သတင်းကောင်းကတော့ စက်ရုံကို ဆွဲနေတဲ့ မီးလိုင်းရောက်သွားပီ အဲ့ဒီမီးနဲ့ ပေါင်းဖို ၂ကရေပန့်ကို ကို အရင်စလည်အောင် လုပ်ပီး နောက်ပိုင်းမှာ ပေါင်းဖို ၁..၃..၄ ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်။ နောက် ပေါင်းဖို ၅ နဲ့ ၆ မှာလည်းအရင်အရေးပေါ်မီးစက်နဲ့လည်နေတာကနေအပိုစက်တွေလည်းထပ်လည်နေပီလို့ပြောပါတယ်။
အဆိုးဆုံးအလွန်ဆုံးဖြစ်နို်င်တာကတော့ချာနိုဘိုင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့သလို မျိုးထိဖြစ်လာပီး ဆိုရင် တော့
Posted by Admin at Saturday, March 19, 20112comments
Three Mile Island (TMI) Nuclear Accident or China Syndrome
ကဲ ဟုိုတလောကကုိုယ် ပြောထားတဲ့ ၃မုိုင်အရေးအခင်းလာပါပီဗျာ။ ခု ဂျပန်မှာလဲ အဆင့်(၅) သတ်မှတ်လုိုက်တယ်ဆုိုတော့၊ ဖြစ်တဲ့လယ်ဗယ်ချင်းတူသွားပီ ဆုိုတော့ ဖတ်ရတာ ပိုစိတ်ဝင်စား ဖို့ကောင်းမယ်လုို့ယူဆပါတယ်။စဖြစ်တာကတော့ ၁၉၇၉ မတ်လ ၂၈ရက် မနက် ၄နာရီပါ။ အမေရိကန်.ပန်ဆင်လ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်. ဟယ်ရစ်ဘာဂ် မြို့နားက ၃မုိုင်စက်ရုံမှာပါ။
Posted by Admin at Saturday, March 19, 2011 1 comments
Labels: Nuclear, Nuclear Accident, Nuclear Reactor
Posted by Admin at Saturday, March 19, 20119comments
၁) ညူကလီယား အန္တရာယ်အဆင့်ကို တုိုးလုိုက်တယ်ကြားတယ်၊ အရင် ၄ ကနေ ခု ၅ လုို့ပြောတယ်၊တနည်း အားဖြင့် ဒါဟာ အမေရိကန်က ၃မိုင်ကျွန်းအရေးအခင်းနဲ့ အဆင့် တူသွားပီ ပြောလို့ရတယ်။
Posted by Admin at Friday, March 18, 20113comments
ဖူကူရှီးမားကြောင့် ဂျပန်အစိုးရ တရုတ်ရဲ့ နှပ်ပစ်ခံရခြင်း
ဇတ်လမ်းကတော့ အတော်အခံရခက်ဖုို့ကောင်းပါတယ်။ သူခုိုးက လူပြန်ဟစ်တယ်ဆုိုတာ ဒါမျိုးနေမယ်။
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ဟာ ဘယ်တုန်းက မှ နုိုင်ငံတကာ ကိုအသိမပေးပဲ (နောက်ဆုံးသူ့နုိုင်ငံသားတွေတောင် အသိပေးတာမဟုတ်ဘူး၊တုိုင်းပြည်တုိုးတက်အောင်လုပ်တာတော့ မှန်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူလုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့ ၊ပြည်သူလူထု့ကိုမျက်စိပိတ်နား ပိတ်။ ဟုိုဟာပိတ်၊ဒီဟာပိတ်၊အင်တာနက်လုိုဟာမျိုးတောင်ပိတ်ထားတယ်။ အဲ့လိုလုပ်ထားတဲ့အစိုးရပါ) လုပ်ချင်ရာလုပ်တဲ့သူကလာပီး၊ ဂျပန်အစိုးရကိုအပြစ်တင်သတဲ့ဗျိုး၊ ကြားလုို့မှကောင်းကြသေးရဲ့လား၊ အရပ်ကတုို့ရေ။
Posted by Admin at Friday, March 18, 20114comments
ပြင်ဆင်ချက်။ ။ ညူဓါတ်ပေါင်းဖို အမှတ် ၄ အား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ရေဖျန်းခြင်း နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ
ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါရန်။ နေ့လယ်က ရေးထားတာမှာ ပေါင်းဖုို အမှတ်(၄) ဆုိုပီးရေးထားတာ၊ ခု နောက်ဆုံးသတင်းအရ အမှတ်(၄) ကို မဖျန်းဖြစ်ပါဘူးတဲ့၊ ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်ကနေရေဒီရေးရှင်းတုိုင်းတော့ အမှတ်(၃)က ရေဒီရေးရှင်းပိုများနေတာတွေလုို့ ပေါင်းဖုိုအမှတ်(၃) ကိုပဲ ၄ ခေါက်ဖျန်းခဲ့တယ်လုို့သိရပါတယ်။
Posted by Admin at Friday, March 18, 20112comments
Posted by Admin at Thursday, March 17, 2011 1 comments
ညူဓါတ်ပေါင်းဖို အမှတ် ၄ အား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ရေဖျန်းခြင်း နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ
ဒီနေ့ နောက်ထပ် စဉ်းစားပုံတမျိုး ထုတ်ပီး ပေါင်းဖိုအမှတ် ၃၊ ရယ် ပေါင်းဖိုအမှတ် ၄ မှာရှိနေတဲ့ ညူလောင်စာတွေ သိမ်းထားတဲ့ ကန်ကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ရေလောင်းချတာရယ် ၊ နောက် ပင်လယ်ဘက်ကနေ လဲ သင်္ဘောာကနေရေပိုက်တွေနဲ့ ထိုးပက်ပြီး ရေဖျန်း တာတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုပီး ဘီဘီစီ သတင်းမှာကိုယ် တွေ့လိုက်တယ်။ မနေ့ကထဲက ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ အဲ့လို့ဖျန်းဖို့စီစဉ်သေးတယ်။ အဲ့တုန်းကတော့ ပိုင်းလော့နဲ့အမှုထမ်းတွေ ရောင်ခြည်သင့်နိုင်တဲ့နုန်းများ လို့ဆိုပီး နောက်ပိုင်းမှာ ဖျက်လိုက်တယ်ကြားတယ်။ ရောင်ခြည်က အပေါ်တည့်တည့်ကို တက်တဲ့ဟာ ကပိုများတယ်လို့ပြောတယ်။ ဒီနေ့တော့ ရောင်ခြည်ထွက်တဲ့ပြင်းအားကျသွားလို့ထင်တယ်။ လုပ်ငန်းပြန်စနေတယ်ဆိုတော့။ နောက် ပိုပီးအဆင်ပြေအောင် ပင်လယ်ဖက်ကနေ သင်္ဘောာနဲ့ ဖျန်းတာဖြစ်မယ်။ အဲ့ဒါကတော့ အပေါ်တည့်တည့်က မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ပိုသက်သာတာပေ့ါ။
Posted by Admin at Thursday, March 17, 20112comments
ယနေ့ထိ ကိုယ့်ပို့စ်မှာ ရေးထားတဲ့စာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှယ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ကိုယ့်ရည်ရွယ်ချက် ကိုက..ခုလတ်တလောဂျပန်မှာ ဖြစ်နေတဲ့အခြေ အနေတွေကို လူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် အသိပေးချင်လို့စရေး လိုက်တာပါ။ သိပြီး လုပ်သင့်တယ်ထင်တာကို လုပ်တာကောင်းတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ပဲ..ဘာမသိညာမသိ.. စိုးရိမ်အလန့်တကြားဖြစ်တာမျိုးကို ရှောင်နိုင်အောင်လို့ပါ။ သိပီး စိုးရိမ်သင့်တယ်ထင်လို့ စိုးရိမ်တာမျိုး၊မ စိုးရိမ်သင့်ဘူးထင်လို့ မ စိုးရိမ်တာမျိုးပဲ ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။
Posted by Admin at Thursday, March 17, 20113comments
Labels: Announcement, Fukushima Nuclear Accident
မနေ့က သတင်းတွေ နားထောင်ရင်းနဲ့ လူတွေ.. panic ဖြစ်တာကို သွားတွေလိုက်တယ် ။ အင်း panic ဖြစ်တယ်ပြောရမလား၊ ဘယ်လိုပြောရမလဲတော့ မသိဘူး။ သတင်းမှာ ခု အမေရိကားမှာ iodine tablets တွေပြတ်လပ်ကုန် အောင်ရောင်းနေရတယ်ဆိုပဲ။ လူတွေလဲ အပြေးအလွှားဝယ်ကြတာ အင်တာနက် အွန်လိုင်းမှာ လေလံဝင်ပစ်ကြလို့ ဈေးတွေလဲတက်ကုန်တယ်တဲ့။ တစ်ထုပ်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀တောင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါ့လား။
Posted by Admin at Thursday, March 17, 20110comments
Posted by Admin at Wednesday, March 16, 20113comments
ဖူကူရှီးမား နံပါတ် (၁) ညူကလီးယားစက်ရုံ Reactor No (3)
နံပါတ်(၃) ဟာ လောင်စာတောင့် အနေနဲ့ ယူရေနီယမ် သက်သက်မဟုတ်ဘဲ. ယူရေနီယမ် နဲ့ ပလူတိုနီယမ် အရောကို သုံးထားပါတယ်။ MOX fuel လို့ခေါ်တယ်၊ ဒီလောင်စာ ဟာ ယူရေနီယမ် သက်သက်သုံးတာနဲ့စာရင် ပိုပြီး အန္တရာယ်ကြီးမားတဲ့ ရေဒီယိုသတ္တု ဓါတ်တွေကိုထွက်စေနိုင်တယ်။ဒါကြောင့် ဒီကောင့်ရဲ့ တတိယအကာ လုံခြုံစိတ်ချရမှုဟာ
Posted by Admin at Wednesday, March 16, 2011 1 comments
Fukushima Power Plan (1) Reactor No (2)
ပေါင်းဖိုနံပါတ်(၂) ရဲ့ အစဦး အခြေအနေမှာ ဒီဇယ်မီးစက် တောင်အလုပ်လုပ်သေးတယ်လို့သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် တနာရီလောက်လည်ပီးရပ်သွားတယ်။ နောက် တခြားက အရေးပေါ်မလာတဲ့ ရွှေလျားမီးစက်နဲ့ ဆက်ပီး အအေးပေးစနစ်လည့်ပါတ်တယ်လို့သိ ရတယ်။ နောက် ပေါင်းဖိုထဲက..ရေလယ်ဗယ်ဟာ တည်ငြိမ်တယ် နည်းသွားတာ မတွေ့ရဘူး။ ဒါကြောင့် ပထမ ပိုင်းမှာ (၂) ဟာ အခြေအနေမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအခြေအနေဟာ မတ်လ (၁၄)ရက် ညနေ ၃း၂၉ မှာပြောင်းသွားတယ်။ အအေးပေးစနစ် ရပ်တန့်သွားပီး ရေလယ်ဗယ် ကျလာတယ်လို့သိရတယ်။ ဘာကြောင့် ရပ်သွားလဲဆိုရင် ရေပန့်စက်အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဆီ
Posted by Admin at Wednesday, March 16, 20110comments
Posted by Admin at Tuesday, March 15, 20116comments
ဖူကူရှီးမားကြောင့် ဂျပန်အစိုးရ တရုတ်ရဲ့ နှပ်ပစ်ခံ...
ပြင်ဆင်ချက်။ ။ ညူဓါတ်ပေါင်းဖို အမှတ် ၄ အား ရဟတ်ယာဥ...